IApartment yeStellar Central City-Hagley Park
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguTrish And Mark
Le ndlu intle intsha ibekwe kanye kumbindi weSixeko saseChristchurch; kufuphi neHagley Park kunye nokuhamba imizuzu elishumi ukuya kwisibhedlele saseChristchurch kunye namabala eqakamba. ITerrace yindawo edumileyo edolophini ekumgama wemizuzu engama-20, ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya eRiccarton Mall.
Iindwendwe zinendawo yazo yokungena yabucala kunye nokusetyenziswa kwekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iwasha / isomisi, ishedi yeebhayisekile, igumbi lokuhlambela kunye nendawo engaphandle enefenitshala. Igumbi elinye lokulala elinebhedi enkulukazi kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuphumla.
Igumbi elinye lokulala elijongene neHagley Park entle. Kufuphi ne-Christchurch enomtsalane kubakhenkethi, iivenkile ezingaphakathi edolophini, iRiccarton Mall, iCricket Grounds, isibhedlele saseChristchurch, iAvon River, iiGadi zeBotanical kunye neecafe ezininzi ezithandekayo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, le ndlu ijongene neHagley Park eyintliziyo yesiXeko saseChristchurch apho abantu abaninzi behamba, behamba ngebhayisekile kwaye bonwabele ukuhamba nezinja zabo. Yipaki entle eyi-164 yeehektare eyeyona ndawo ivulekileyo yasezidolophini eChristchurch. Ikwakufuphi neHagley Oval Cricket Ground apho imidlalo emininzi yeQakamba yaMazwe ngaMazwe idlalwa ehlotyeni.
Isibhedlele saseChristchurch kunye neSibhedlele sabaseTyhini saseChristchurch zihamba imizuzu eli-10.
Ezinye izinto ezinomtsalane- iiGadi zeBotanical, iMyuziyam yaseChristchurch, iAvon River, iSikhumbuzo seSizwe seCanterbury Earthquake, iChristchurch Art Gallery.
Umbuki zindwendwe ngu- Trish And Mark
Sinenkqubo yokuzihlola ngokwakho ngoko akuyomfuneko ukuba iindwendwe zidibane nam. Mna nomyeni wam sihlala kwindawo encinci yelizwe malunga nesiqingatha seyure ukusuka kwindawo yokuhlala. Sihlala sonwabile ukuphendula nayiphi na imibuzo kwaye silungise imiba xa inokuthi ivele.
Sinenkqubo yokuzihlola ngokwakho ngoko akuyomfuneko ukuba iindwendwe zidibane nam. Mna nomyeni wam sihlala kwindawo encinci yelizwe malunga nesiqingatha seyure ukusuka kwindawo yok…
UTrish And Mark yi-Superhost